Ị ma njirimara arịa kichin silicone?
Ngwongwo kichin nke silicone aghọwo ihe ewu ewu na mba ofesi.A na-eji silicone eme ihe n'ọtụtụ ebe na kichin n'ihi njirimara pụrụ iche nke nchebe gburugburu ebe obibi, oke okpomọkụ na-eguzogide, enweghị ntụpọ, na mmetụta aka dị mma.Taa, m ga-ewebata njirimara nke ngwa kichin silicone ...
Ọ dị mfe iji ahịhịa silicone?
Oge okpomọkụ ọ bụla na-ekpo ọkụ nke ukwuu, yabụ otu iko tii mmiri ara ehi ga-abịa.Ebe ọ bụ na ị na-aṅụ tii mmiri ara ehi, ị ga-eche banyere mkpa, ya bụ, ahịhịa;Ahịhịa ndị a na-ahụkarị n'ahịa bụ ụfọdụ ahịhịa rọba, na nnukwu uru nke ahịhịa rọba bụ na ọ dị ọnụ ala, mana ọ naghị adị oke mma;Karịsịa mgbe ị na-aṅụ ho...
Enwere ike igbanye ngaji silicone na sterilizer ma ọ ga-emebi?
Nhọrọ mbụ nke tableware maka ụmụaka na-eri onwe ha bụ n'ezie ngaji silicone.Isi ihe kpatara ya bụ na ọ dị mma na gburugburu ebe obibi na nro.N'ozuzu, ndị nne na nna ga-agbapụta ya tupu ha ejiri ya mee nwa ọhụrụ.Ya mere, enwere ike igbanye ngaji silicone na sterilizer?O doro anya...
Ogologo oge ole ka arịa kichin silicone na-adịru?
Silicone kichin arịa set ka nke nri-ọkwa silicone akụrụngwa, nke na-integrally kpụrụ iji hụ na-adịghị egbu egbu, colorless, odorless, gburugburu ebe obibi na mmetọ efu.Nguzogide okpomọkụ dị ezigbo mma, ọ nweghị ike imebi ma ọ bụ ịkpụzi na okpomọkụ dị elu nke 240 Celsius, ọ ga-...
Olee otú ịmata àgwà silicone tableware?
Ebe ọ bụ na tebụl silicone na-amasị ọtụtụ ndị mmadụ, a na-enwewanye ndị na-emepụta silicone tableware, ma iji chekwaa ego, ụfọdụ ndị na-emepụta na-eji shoddy na adịgboroja.N'ebe a, m ga-akụziri gị ọtụtụ ụzọ iji chọpụta àgwà silicone tableware.Mgbe...
Kedu ụdị ngwaahịa silicone adịghị mfe ịgbanye edo edo
Icha ngwaahịa silicone na-acha odo odo: Okwu silicone a na-ahụkarị bụ ekwentị ekwentị silicone.Ihe na-acha odo odo bụ ihe dị mkpa nke ngwaahịa silicone nkịtị.N'ozuzu, ngwaahịa a ga-agbanwe edo edo mgbe ejiri ya ogologo oge mgbe mgbanwe gburugburu ebe obibi gasịrị, mana a na-agbakwụnye mgbochi-acha odo odo fr ...
Otu esi ehicha ihe mkpuchi silicone maka oge mbụ
Ihe mkpuchi silicone n'onwe ya abụghị ihe na-egbu egbu na nke na-adịghị emerụ ahụ ma bụrụ nke sitere na akụrụngwa silicone ọkwa nri, mana a na-ejikwa ya mgbe ọgwụgwọ okpomọkụ dị elu mgbe mbụ zụrụ ya.Mgbe a na-eji silica gel ice tray maka oge mbụ, a ga-etinye ya na mmiri esi mmiri nke 100 degrees ...
Enwere ike ịcha ngwaahịa silicone?
Enwere ike esiji ngwaahịa silicone.Enwere ọtụtụ ngwaahịa silicone n'ahịa, dị ka iko muffin silicone, ahịhịa na-asachapụ ihu silicone, mkpuchi ekwentị silicone, ite silicone na ọkwá, na ihe ụmụaka ji egwuri egwu silicone.N'ihe ndị dị anyị mkpa kwa ụbọchị, ọtụtụ mmadụ na-ejikwa silicone kitchenware.Na p...
Kedu otu esi ahọrọ arịa kichin, tebụl silicone nwere ike ịrụ ọrụ?
site admin na 22-03-28
N'ime ndụ anyị kwa ụbọchị, anyị ga-emerịrị ihe ndị dị na tebụl na kichin kwa ụbọchị.N'ihu efere seramiiki na-acha ọcha na shọvel ígwè, ọ ga-abụrịrị na ọ ga-emepụta ihe na-adịghị atọ ụtọ, ya mere, dị ka ịdị ọhụrụ nke ndị na-azụ ahịa si dị, a na-eji nwayọọ nwayọọ na-eji plastik, TPE, osisi na ihe ndị ọzọ.Ntinye...
Uru na ọghọm dị na spatula nri silicone
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, arịa ụlọ kichin na-ewu ewu karị kwesịrị ịbụ spatula silicone.Silicone spatula aghọọla ngwa ngwa ngwa ngwa kichin n'ihi ịdị ọkụ ya, ịdị mma na nguzogide okpomọkụ dị elu.Ma eleghị anya, ị ka nwere obi abụọ banyere spatula silicone.Ọ bụ spatu silicone ...
Enwere ike itinye akwa silikoni na oven?
Enwere ike itinye akwa silikoni na oven, kedu uru ọ bara?Nhọrọ ihe eji eme ụlọ, silicone na-esi nri bụ arịa kichin a na-ahụkarị n'ime ezinụlọ anyị, ngwa a nwere ike ịme achịcha macaron ma ọ bụ anụ a ghere eghe, ihe eji eme ihe na-esi nri bụkwa ihe silicone ọkwa nri, ọ na-...
Ị maara nke ọma na usoro disinfection nke rọrọ nwa silicone spoons?
Nchekwa ngwaahịa ụmụaka bụ ihe kacha emetụta ndị nne.Maka ndị nne, ha na-achọkarị ihe kacha mma maka ụmụ ọhụrụ ha.Ya mere, ọtụtụ n'ime ngwaahịa ụmụaka na-eche banyere nlekọta aka.N'oge na-adịbeghị anya, ụfọdụ ndị nne enwebeghị ahụmahụ.Amaghị m ka esi esi sterilize ngwaahịa ụmụaka, t...